‘Farmaajo Weji u qarsoona la soo baxay lataliyana ka dhigtay Qabyaaliste weyn Xogmuhiima! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uncategorized ‘Farmaajo Weji u qarsoona la soo baxay lataliyana ka dhigtay Qabyaaliste weyn...
‘Farmaajo Weji u qarsoona la soo baxay lataliyana ka dhigtay Qabyaaliste weyn Xogmuhiima!
”Madaxweynaha DF Somalia,Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqday Kaligii Taliye Kaxun Dawladii Adeerkiis Maxamed Siyaad Barre isaga oo latiye gaara ka dhigtay Ra’iisul Wasaarahii Hore Cabdiweli Sheekh Axmed habeen walbana qadka Telefoonka latashiyo kula sameeya sida ilo wareedyo Muhiima aan ku heleeyno.
‘Farmaajo iyo Cabiweli Yuulka oo udhashay Beesha Mareexan ayaa heshiish is af garad ah wuxuu ku dhex maray -mar aay Kawada qayb galayeen Mashruuc Qaaraan dhaqaale Loogu Uruurinayay Cisbitaal Loogu Magac daray Madaxweynihii Keli Taliska ahaa ee Somalia oo Lagu Magacaabo Jaale Siyaad Hospital Kaas oo ay hindisaha in la Sameeyo ay leeyihiin Shakhsiyaad ka soo Jeeda Beesha Madaxweyne Farmaajo ee Mareexan.
Qabyaaladda Mareexaan Iyo Farmaajo